अमेरिकामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ९० हजार नाघ्यो – Khabar Silo
Posted on May 19, 2020 May 19, 2020 Author khabar silo Comment(0)
६ जेठ, काठमाडौं । अमेरिकामा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण ९० हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ ।
जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयको तथ्यांक अनुसार अमेरिकामा मृतकको संख्या ९० हजार ३ सय ९ पुगेको छ ।
कोरोनाबाट संक्रमितको संख्या १५ लाख ६ हजार ८ सय ४० छ । कोरोनाबाट विश्वमै बढी प्रभावित देश अमेरिका हो ।
ट्रम्पले भने– हाइड्रोक्लोरोक्विन औषधि खाइरहेको छु
यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना भाइरस संक्रमणबाट जोगिनका लागि हाइड्रोक्लोरोक्विन औषधि खाइरहेको बताएका छन् । जबकी यसअघि मलेरियाका बिरामीलाई दिइने यो औषधिको ट्रम्पले खिल्ली उडाएका थिए ।
सोमबार पत्रकारहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा ट्रम्पले भने, ‘मैले करिब डेढ हप्तादेखि यो औषधि खाइरहेको छु, त्यसैले म यहाँ उपस्थित हुन सकेको छु । तपाईंले देखिरहनु भएको छ । मेरो तर्फबाट यही नै प्रमाण हो । यसबारे धेरै सकारात्मक फोन आइरहेको छ ।’
केही वैज्ञानिकहरुले हाइड्रोक्लोरोक्विनबाट कोरोनाविरुद्ध लड्न मद्दत मिल्छ भनेपछि अमेरिकाले यो औषधि भारतबाट समेत किनेको थियो ।
वैज्ञानिकहरुका अनुसार कोरोना भाइरसविरुद्धको औषधि अझै पत्ता लागेको छैन तर हाइड्रोक्लोरोक्विन औषधिले रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने बताइन्छ ।
काठमाडौं- गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा लगानी ३.४ प्रतिशतले खुम्चियो। लगानी मात्रै होइन,कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को तुलनामा बचत पनि घटेको छ। गत वर्षको तुलनामा कुल गार्हस्थ बचत २.४ प्रतिशत बिन्दुले घटेर १८.१ प्रतिशतमा आइपुग्ने प्रक्षेपण अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ। अहिले अर्थतन्त्रको स्थापित चक्र ध्वस्त हुँदा त्यसले बचत र लगानी दुवै प्रभावित हुन थालेको […]
७ जेठ, काठमाडौं । भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्यमन्त्री डा. हर्ष बर्धन विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)को ३४ सदस्यीय कार्यकारी बोर्डको अध्यक्ष हुने भएका छन् । उनले २२ मेमा आफ्नो पदभार सम्हाल्ने छन् । डा. हर्ष वद्र्धनले जापानका डा. हिरोकी नकतानीको स्थान लिने छन् । १९४ देशको विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनमा मंगलबार भारतको तर्फबाट राखिएको हर्ष बर्धनको नाम निर्विरोध […]
एजेन्सी । यतिबेला बलिउड हाँस्य कलाकार भारती सिंह र उनको पतिको बारेमा संचार माध्यममा निकै चर्चा छ । बलिउडमा ला’गू औ’ष’धको लामो जालो रहेको देखिएको छ । भारती र उनका श्रीमानलाई पनि प्रहरीले सोही घटनामा पक्राउ गरेको थियो । उनीहरुको घरवाट गाँ’जा समेत वरामद भएको थियो । दुई दिनको हिरासत वसाई पछि भारतीलाई अदालतले उनको […]
कर्णाली पनि अछुतो रहेन : साेमबार दैलेखमा एक कोरोना सङ्क्रमित भेटिए